HELOKA BEVAVA MPISOLOVAVA
HELOKA BEVAVA NY MPISOLOVAVA
Izany dia manomboka amin’ny mialoha ny famokarana
Indrisy, ao amin’ny heloka bevava, amin’ny toe-javatra sasany, nisy ny fanitsakitsahana ny zon’olombelona. Noho izany, ny fomba mahomby indrindra ny fiantohana ny zo fiarovana ny miahiahy, ny voampanga na ny voampanga no nandray anjara tamin’ny ady heloka bevava raha ny mahay torohevitra.
Mpisolovava za-draharaha dia tena manampy, vokatry ny dona ara-tsaina vokatry ny fisamborana sy ny arraignment, ary koa noho ny ara-dalàna tsy fahaizana ireo olona no tsy afaka hiaro ny fomba fanatanterahana ny lalàna, indrindra fa raha tany am-ponja.
Ny lalàna momba ny fanompoana ao amin’ny heloka bevava dia nisy vondrona mpisolovava no Niray toy izany koa ao anatin’ny tontolon’ny asa, ny lalàna momba ny heloka bevava, ary izay ara-drafitra subdivision ny renivohitry ny United Collegium ny mpiaro. Iray amin’ireo tombontsoa lehibe ny Birao, miasa ao amin’ny heloka bevava ny toe-javatra, dia ny ekipa za-draharaha matihanina miasa ao amin’ny manokana ny mombamomba ny lokan ny fiaraha-monina ara-dalàna. Ny tsara mpiaro izay mifanitsy ny mombamomba ny raharaha (lahatsoratra manokana), dia hanome ny voampanga mahomby kokoa ny fiarovana
MILA ARA-DALÀNA NY TORO-HEVITRA MAIMAIM-POANA